सांसद खिमविक्रमको रिपोर्ट पोजिटिभ निकाल्ने ल्याबका सञ्चालकलाई डिन उपहार | पहिलो बोली
२०७८ जेष्ठ ४, मंगलबार (८ महिना अघि)
८६४७ पटक पढिएको
Published on: Tuesday May 18, 2021 (8 months ago)
पोखरा विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान संकायको डिनमा डा. अमर नागिला नियुक्त भएका छन् । विश्वविद्यालयको सोमबार बसेको कार्यकारी परिषद्ले डा. नागिलालाई डिन नियुक्त गरेको हो । नागिला हाल स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेसका सहप्राध्यापक हुन् ।
नवनियुक्त डिन डा. नागिला त्यही ल्याबका सञ्चालक हुन्, जसले गण्डकी प्रदेशका एक सांसदको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ निकाल्दा खैलाबैला मच्चिएको थियो । एकैदिन संकलित राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीको स्वाबको नतिजा १५ वैशाखमा पोजिटिभ आएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची रहँदाकै दिन सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएका थिए । त्यही दिन डा. नागिला सञ्चालक रहेको लाइफकेयर डाइग्नोस्टिकले सांसद शाहीको रिपोर्ट पोजिटिभ निकालेको थियो ।
१५ वैशाखमा लाइफकेयरले पोजिटिभ रिपोर्ट निकाल्दा प्रदेश क्षयरोग उपचार केन्द्रस्थित पीसीआर ल्याबमा सांसद शाहीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । source Shilapatra